AGV ယာဉ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ AGV ယာဉ်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. အကောင်းဆုံးကိုဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် AGV ယာဉ်များ in Taiwanဤမြေကွက်၌အတွေ့အကြုံ .Years ကျနော်တို့အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဝေါဟာရ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအပြိုင်အဆိုင်များစေနိုင်ရန်အတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်။ အများဆုံးဈေးမှာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တိမပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီပန်းတိုင်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစတင်မိတ်ဆက်ကြပါပြီဟု, ထုတ်ကုန်တစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းမေးစရာရှိပါကထိုကြောင့်, သင့်ကိုငါတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအဖြေပေးလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံစံ - Robin-Fork
ရော်ဘင်-Fork သည် pallets များကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ရွှေ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်,pallets များအထက်တွင်တင်သောဝန်,စက်ရုံများနှင့်သိုလှောင်ရုံများတွင်.၎င်းသည် ၁၃၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိတင်နိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံး ၅၀ မီတာတွင်ရွေ့နိုင်သည်/မိ.၎င်းကိုသံမဏိဖြင့်အပြည့်အ ၀ ပြုလုပ်ထားသည်,၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား AMV များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလေးနက်စေသည်.
အရာဝတ္ထုထောက်လှမ်းရေးအာရုံခံကိရိယာများနှင့်လုံခြုံရေးအာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသည်,ရော်ဘင်-Fork သည်သူတို့သယ်ဆောင်သွားမည့် pallets အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်,အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့်မတိုက်ဘဲလူနေကျပ်သောသို့မဟုတ်လူစည်ကားသောနေရာများတွင်လုံခြုံရေးကိုလုပ်ဆောင်ပါ.
မက်စ်.မြန်နှုန်း: ±၅၀ မီတာ/မိ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/agv-vehicles.html
အကောင်းဆုံး AGV ယာဉ်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် AGV ယာဉ်များ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ